Modalités d’adhésion | TAMIFA Madagascar
FEPETRA FIROTSAHANA HO MPIKAMBANA
Ireo olona fantatra sy voasedra tamin’ny asa nentanina Fikambanana,tao anatin’ny raharaham-pihariana na fiainam-piaraha-monina na koa lafin-tsehatr’asa samihafa no Mpikambana amin’ny TAMIFA Madagascar ka ny MPANDRINDRA FOIBE no manamarina ny maha-raikitra sy maha ara-dalàna.
Arak’izany dia misokajy telo(3) ireo fombafomba firotsahana:
1)Firotsahana ho an’olon-tokana
Mameno ny taratasy manamafy ny firotsahana izay efa vita modely avy amin’ny Fikambanana ireo izay maniry izany rehefa avy nandray fanazavana sy namaky ireo fitsipika mifehy ny TAMIFA Madagascar ka havantana amin’ny MPANDRINDRA FOIBE.Ampiarahina aminy ny sary tapaka roa(2) miloko sy fiantohana avy amin’ny RANTSANA misy ny mpangataka na ataon’ny Mpikambana raikitra iray na vitsivitsy. Mandoa ny latsakemboka izay feran’ny FILAN-KEVITRA FOIBE sy mandray ny satan’ny mpanara-maso(membre observateur)ny mpangataka ary afaka mandray anjara amin’ny raharahan’ny Fikambanana saingy mbola tsy manana zo amin’ny fanapahan-kevitra.
Amin’ny fivorian’ny FILAN-KEVITRA FOIBE kosa no handraisana fanapahana amin’ny fandraisana Mpikambana vaovao.Raikitra avy hatrany izany rehefa nahafeno telo(3) volana amin’ny daty nanaovana ny fangatahana sy tsy misy fitsipahana ka soratana ao amin’ny rejistra natokana ho amin’izany.
2)Firotsahana ho an’ny vondron’olona
Ny vondron’olona efa manana fifampifehezana manokana toy ny Fikambanana sy ny sehatra samihafa dia mahazo manao fidirana ho Mpikambana mitambatra.
Manao ny fangatahana an-tsoratra ny faniriany izy ireo ary ampiarahany amin’ny filazalazana ny mombamomba azy.NY FIVORIAMBE kosa no manao ny fankatoavana ny fandraisana azy ho raikitra,indrindra raha manana endrika nasionaly ny fifampitondran’izy ireo.
Mitoetra avy hatrany ho SAMPANA mijoro anatin’ny TAMIFA Madagascar(And 16 Sata fototra,And 04 sy And 07 Fitsipika anatiny) ireo vondron’olona tafiditra ho Mpikambana ka manan-jo hanapa-kevitra amin’ny FILAN-KEVITRA FOIBE ny mpitarika azy.
Ny FILAN-KEVITRA FOIBE no mamaritra ny fetran’ny latsakemboka tandrify amin’ireo karazana vondron’olona miaraka.
3)Fandraisana Mpikambana mpanohana
Ny olona ivelan’ny Fikambanana miara-miasa maharitra na voafetra aminy dia raisina avy hatrany ho Mpikambana mpanohana(And 18 Fitsipika anatiny).Ny BIRAO FOIBE no manasokajy sy mitondra ny fandaminana azy ireo.
NB:-Tsara ny mamaky sy mandinika tsara ny Statuts sy ny Fitsipika anatiny mialohan’ ny handraisanao fanapahan- kevitra.
-Ny Mpandrindra foibe dia afaka manao fiantohana (parrainage) antsika maniry ny hirotsaka mandeha amin’ ny anaran’ olon -tokana ao aoriana resadresaka fohy (entretien)izay hifanaovana aminy.